Umhla My Pet » Isikhokelo Instant Checkmate ukuba uzibhaqe Fake Online Daters
ngokuthi Logan Strain
Isikhokelo Instant Checkmate ukuba uzibhaqe Fake Online Daters
ukubuyekezwa: Oct. 28 2020 | 3 min ukufunda
Ngamanye amaxesha Kwaye enethemba nje ingqalelo. Ngamanye amaxesha Kwaye iintatheli uzama ukwenza ingongoma. Kwaye ngamanye amaxesha bafuna nje ukuba scam kuwe. Enoba ezibakhuthazayo na, isixa esikhulu yeprofayili ukuthandana zakwi epheleleyo fakes - profiles etsomo yenzelwe dupe daters ukunyaniseka online. Ke ukuba anithanga ukugcina iliso ngaphandle, usenokuba lixhoba olandelayo.
Le ndlela kwemitholo, owabizwa ngokuba catfishing, uchitha ixesha abantu nemali yonke imihla. Nangona uninzi daters online abantu ezimangalisayo, kukho ezimbalwa amaqanda embi apho. ngethamsanqa, scammers intanethi bakholisa ukuba abe nezitshetshe, ngokwehla kwi kokha, ngoko zikholisa ukwenza iimpazamo elula ukuba othulula off Iqhinga yabo. Ukuba ufuna ukuqinisekisa ukuba umhla wakho elilandelayo le makanenzele ngokwenene, ukugcina la macebo ezilula engqondweni kuhambo yakho intanethi ukuze romance.
1) Yenza Ebuyiselwayo Uphendlo Lomfanekiso
Ingxelo ukuqhatha kukwathetha imifanekiso zomgunyathi. Xa abakhohlisi intanethi ukwakha iprofayile ukuqhatha online, baza badla ingaxuthi imifanekiso befumanisa isuke kwi Internet. ngokukodwa, abo ukuba bafumane emva lasekhaya le "guy ashushu" okanye "intombazana ashushu." bobe nokuba layisha headshots esuka kumanxuwa yokubumba ukuze enze inkangeleko yabo, elinesoya kangangoko kunokwenzeka. Musa ukuqhathwa. Indlela elula ukubona ukuba umfanekiso wabo intanethi na esiyidyuplikheyithi ngokulawula Google reverse umfanekiso khangela. Ukuba umfanekiso wabo iprofayile kokutyatyekwa lonke Internet, okanye ukuba umfanekiso ngokucacileyo engeyoyakho, uyakwazi umelwe kukuba ube catfisher ezandleni zakho.
2) Khangela Kuba buhlungu IsiNgesi
Ukuba profile zabo zenza kubonakala ngokungathi wazalwa waza wakhulela lithi, kodwa igrama izandi ngathi umntu lowo nje ukufunda ulwimi, oko iflegi enkulu ebomvu. scammers ukuthandana zakwi rhoqo phesheya. Baya kuthi ukuba ayinto njengoko American Mount Rushmore, kodwa eneneni nje bathi ukuze uthathe imali American. Ukuba paramour ngekhompyutha rhoqo yenza upelo negrama iimpazamo ukuba ukubhabha eklasini kwibakala 3, oko kungathetha ukuba singumbono scammer zangaphandle.
3) Yenza Imvelaphi Khangela umculo umxokozelo
iirekhodi zikarhulumente ziyafumaneka kumntu wonke ofuna ukuzibona. Ngoko ukuba umntu ekunokuqhagamshelwana intanethi wazalwa eUnited States, kufuneka babe iirekhodi ifayile kawonke. Khangela igama labo, kunye nobume bazo, kwi iirekhodi zikarhulumente online yokukhangela. Ukuba akukho nto ihlala, oko ngumqondiso ukuba Uyafana osaziyo ngokupheleleyo kunye nawe.
4) Lumkelani Abanini-Fast
Ukuba umntu online ufuna ukuba abatsibe "Ukwenza ukwazi ukuba 'uye ngqo kwi" Soulmates ubomi "isigaba ubudlelwane, ukuze kungabi ngenxa yokuba kungekho romantic ndiyazingca. Isenokuba kuba unomdla kakhulu kwiwalethi kunentliziyo yakho. Ekubeni scammers intanethi bayakhuthazeka ukuba barhole umsa yakho ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka, baza kuhamba super ngokukhawuleza. akunaku- ngokukhawuleza. Ukuba ezibanjiswe nithandana ovuthuzayo online, uthabathe eyesibini ukuba ndithobe phantsi unjonge ukuba yonke into efunwa besithi kuyinyaniso.
5) Khangela ukuba ufuna ungaNcokola umxokozelo
Ingaba 100% unxibelelwano kwenziwa ngokusebenzisa email nokubhaliweyo? A ukwala kubiza okanye ukuhlangabezana ubuso ngobuso lisenokubonisa ngaphezu beneentloni. Oku kuthetha ukuba abafuni ukukunika nantoni na ukuba uthandabuze ngobuxoki babo. Ngaphaya lu isitshixo ukuba nolwalamano oluhle. Ukuba abakwazi ngokuphandle ukunxibelelana nawe, uthabathe ukuba zibe ngumqondiso kwabo akanamdla kuwe maxa onke.
ekugqibeleni, xa uye waphathwa Asikhohliswa ngumntu scammer intanethi yaye sele aphulukane niphume nayiphi na imali, ingxelo kwi-Federal Government ngayo Internet Crime yezikhalazo Center. Isenokuba kancinane kulihlazo ukuvuma ukuba bendikhe ukuqhathwa, kodwa ingxelo kuya kukunceda ukuthintela abanye abantu ekubeni bawafumane nyuziwe.
Ngaba Ukuthandana Online Kukhetho Omhle Kuwe?
Indlela Gcina Ulwalamano Lwanelisayo
5 Mal Winter Umhla Ideas